Ny Samsung Galaxy S9 dia hampiditra sensor ao amin'ny fàfana | Androidsis
Samsung dia te hampiditra ny sensor amin'ny tanan-tanan'ny fakantsary ao amin'ny efijery an'ny Galaxy S9
El sensor sensor lasa ampahany lehibe amin'ny finday avo lenta izy io. Ny marika lehibe eo amin'ny tsena toa LG, Huawei, Xiaomi o Apple Manana telefaona miaraka amin'ity rafitra mamoha ity izy ireo. Samsung koa, ahoana no mety hisy raha tsy izany. Saingy, toa te-handroso lavitra kokoa ilay orinasa Koreana.
Zavatra mety tsikaritry ny maro aminareo dia izany Ireo fantsom-paritra dia matetika miorina ao aoriana an'ny smartphone. Izay no tian'i Samsung ovaina. Miasa ny orinasa hampiditra ny sensor sensor eo amin'ny fakan-telefaona. Hahomby ve izy ireo?
Ny drafitry ny orinasa Koreana hampiditra ny sensor-n'ny fantsom-pifandraisana amin'ny efijery finday dia tsy vaovao. Fa izao misaotra amina patanty vaovao ny orinasa dia nahazo toerana ambony. Indrindra satria izay kasain'i Samsung dia ampidiro ao amin'ny efijery Galaxy S9 ilay sensor havoaka amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Ao amin'ny patanty izay efa tafaporitsaka GalaxyClub hitanao a notch eo ambanin'ny tontonana. Toa io no ho toerana hampidirina ilay mpamaky ny rantsan-tanan'ilay fitaovana. Fiovana manan-danja tokoa ary izany dia tsy isalasalana fa vokany mahazo aina bebe kokoa ho an'ny mpampiasa. Ankoatry ny mora ampiasaina.
ny sary patanty dia mamela antsika hanana hevitra mazava tsara momba ny drafitry ny orinasa. Famolavolana miendrika ranomaso, ilaina mba hahafahana mampiditra azy tsara ao anaty tontonana amin'ilay fitaovana. Ny fomba tokana azo atao raha jerena ny Galaxy S9 dia manana efijery tsy manam-petra tsy misy frame.
Samsung dia mitantana ny famoronana buzz amin'ity Galaxy S9 ity. Hanomboka amin'ny fiandohan'ny taona ho avy izao ny haavo farany ambony an'ny marika ary mampanantena ny hanao lohateny lehibe. Ho fanampin'izay, amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ny sensor sensor eo amin'ny efijery amin'ny telefaona, manararaotra ireo mpifaninana aminy lehibe ny orinasa. Ahoana ny hevitrao fa ny sensor momba ny dian-tànana dia tafiditra ao amin'ny efijery?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung dia te hampiditra ny sensor amin'ny tanan-tanan'ny fakantsary ao amin'ny efijery an'ny Galaxy S9
Tsy tiako ilay hevitra hoe eo amin'ny efijery iray ihany ny mpamaky ny rantsan-tànana dia hisy olana lehibe: izany no solomaso miaro. Rehefa manandrana mamoha azy amin'ny rantsan-tananao ianao dia hifandray amin'ity mika ity ary azo antoka fa hanakana ny telefaona tsy ho afaka scan ny dian-tànana.
Mamaly an'i gibran
Samsung mbola tsy manome laharam-pahamehana ireo fanavaozana Android
Handoa anao i Google mba hahitanao fa marefo amin'ny rindranasa Android